युवा मोर्चाको रक्तदान
राप्रपा नेपालको भातृसंगठनको रूपमा रहेको युवा मोर्चाले मोर्चा स्थापनाको पांचौ वार्षिकोत्सवका अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
उपाध्यक्ष मल्ल प्रति श्रद्धांजली
राप्रपा नेपालका उपाध्यक्ष स्व. हेम बहादुर मल्लको निधन प्रति शोक प्रकट गर्न राप्रपा नेपाल केन्द्रिय समितिले काठमाण्डौमा श्रद्धांजली सभाको आयोजना गरेको थियो । श्रद्धांजली सभालार्इ सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले स्व. मल्लको निधनबाट देशले एक कमर्ठ राष्ट्रवादी तथा जनमुखि…
उपाध्यक्ष “शेरे धनुषा” हेम बहादुर मल्लको निधन
राप्रपा नेपालका उपाध्यक्ष तथा पुर्व मन्त्रि हेम बहादुर मल्लको २०६९ जेष्ठ २९ गते काठमाण्डौको नर्भिक अस्पतालमा ७५ वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भएको छ । उंहा केहि समय देखि मधुमेह तथा मृगौला रोगबाट पिडित हुनु हुन्थ्यो ।